बेलझुन्डी कोरोना अस्पताल भन्छ– अक्सिजनको व्यवस्था नभए थप बिरामी भर्ना लिन सक्दैनौँ- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
बेलझुन्डी कोरोना अस्पताल भन्छ– अक्सिजनको व्यवस्था नभए थप बिरामी भर्ना लिन सक्दैनौँ
दाङ — कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीले अक्सिजन व्यवस्था नभए थप बिरामी भर्ना लिन नसक्ने जनाएको छ । १ सय शय्याको अस्पताल भए पनि अक्सिजन अभावमा ५७ जना मात्रै बिरामी राखिएको र अब अक्सिजन उपलब्ध नभएसम्म अरु बिरामी राख्न नसकिने अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्ण वलीले बताएका छन् ।
बुधबार अस्पतालमा एकैदिन चारजनाको ज्यान गएपछि अस्पताललाई बिरामीको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हो ।
‘बिरामी राखिदिन निरन्तर दबाब आइरहेको छ तर हामीसाग अक्सिजन छैन । भएका बिरामीलाई पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने,‘अक्सिजन अभावमा बिरामी राख्नु भनेको जानाजान बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्नु हो ।’ अहिले अस्पतालमा कम्तीमा पनि ५ सय सिलिन्डर अक्सिजन चाहिए पनि १ सय २० सिलिन्डर मात्रै भएको भएका उनले जानकारी दिए । अक्सिजन अभावकै कारण बिरामीको ज्यान जाने अवस्था भएकाले थप बिरामी राख्न नसकिने उनले बताए ।
अक्सिजनको तत्काल व्यवस्था गरिदिन उनले मन्त्री, सांसद्, स्थानीय सरकार, नेता, समाजसेवी लगाएतलाई सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेका छन् । ‘कृपया हाम्रो यो समस्या सबैले सुनिदिनुहोस् । हामी भन्दाभन्दा थाकिसक्यौा । अब हात उठाउने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका मन्त्री, सांसद् र धेरै ठूला नेताहरु हुनुहुन्छ । सबैले यो समस्याको छिटो सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो नत्र बिरामी बचाउन गाह्रो छ ।’
जिल्लामा १ हजार सिलिन्डर आवश्यक परेको र अहिले ६ सय मात्रै उपलब्ध भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए । अन्य सिलिन्डर खोज्न रातदिन लागे पनि पाउन कठिन भइरहेको उनले बताए । ‘हामी अक्सिजनको खोजीमा छौं । रातदिन यसैमा लागेका छौं तर पनि पाउन गाह्रो भएको छ,’ उनले भने,‘अक्सिजन पाउन नसक्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ ।’
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०८:०५
पोहोर कोरोना कहरले सहरमा मृत्यु ल्यायो भनियो, यसपटक उपचार केन्द्रहरूको अभावमा गाउँ–देहातहरू प्रभावित भइरहेका छन् ।
वैशाख २३, २०७८ चन्द्रकिशोर
कोरोनाकालमा भारत वा नेपालकै सहरहरूबाट गाउँ–देहात फर्किरहेका श्रमिक तथा साना व्यवसायीहरूको लस्करले आर्थिक प्रगति, सामाजिक मूल्य र राजनीतिक दायित्व उल्टो दिशामा हिँडिरहेको कथा कहन्छ । यस दारुण महागाथामा हजारौं कथा छरपस्ट भएका छन् ।
कोरोनाको दोस्रो लहर पोहोरको भन्दा भिन्न छ । गत वर्ष नेपालको इतिहासमै सरकारी तवरबाट सम्भवतः त्यति लामो बन्द पहिलो पटक गरिएको थियो । त्यतिखेर थातथलो फर्केकाहरूले सरकारी अव्यवस्था र अकर्मण्यताका कारण निकै कष्ट पाएका थिए । बहुतहका सरकारहरूका बावजुद उनीहरूलाई नागरिकजसरी व्यवहार गरिएन ।
तैपनि त्यतिखेर दशगजामा अड्किन पुगेकाहरू वा मुलुकभित्रै लामो पैदलयात्रा गरिरहेकाहरूलाई जनस्तरबाट सहयोग मिलेको थियो । यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन । सीमानाकाहरूमा पहिलेको जस्तो व्यापक कोकोहोलो पनि देखिएन । स्वदेश फर्किनेहरू बिस्तारै आइदिए । भारतमा लकडाउन अचानक भएन । यसपालि लकडाउनभन्दा कोरोनाको भयले नै धेरैलाई आतंकित बनायो । जेजस्तो भए पनि कोरोना कहरमा ओत लाग्ने थलो गाउँ नै बन्न पुगेको छ ।
ज्वरो, रुघाखोकीबाट गाउँ–देहातका बासिन्दा पीडित छन् भन्ने खबर बाहिरिरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका पालिकाहरूमा संक्रमितहरूको सूची लम्बिँदै छ । गत वर्ष सहरका तुलनामा गाउँमा संक्रमण दर कम थियो । यस पटक भने गाउँमा पनि सहरकै हाराहारीमा संक्रमण बढिरहेको चिन्ता कतिपय पालिकाप्रमुखहरूको छ । सहजै गाउँ फर्केकाहरूलाई पालिकाहरूले न क्वारेन्टिनको प्रबन्ध गरे न त एकान्तवासका लागि उत्प्रेरित नै गरे । अझै पनि उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच हुन सकेको छैन । त्यसैले कोरोना संक्रमितको तथ्यांक आफैंमा अधुरो छ । परीक्षणबिनै मर्नेहरू अज्ञात रोगबाट मरे वा समान्य ज्वरो लागेर बिते भन्ने स्पष्ट नहुँदा भुइँतह त्रसित छ । यस्ता मृत्युको हल्लाले संक्रमितहरू डरमा बाँचिरहेका छन् । यस्तो मानसिक असर कम गर्न तथा उपचार एवं नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्नेसमेत ‘अज्ञात’ नै छ । फलस्वरूप, संक्रमण झन् फैलिँदै छ र प्रभावित गाउँ–टोलमा मानवीय क्षति पनि बढिरहेको छ । कोरोनाका लक्षणहरू आफैंमा अज्ञात होइनन्, थोरबहुत सूचना सबै ठाउँमा पुगेकै छ । तर, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अज्ञानताका कारण संक्रमणका लक्षणहरू देखिँदासमेत तिनका लागि त्यो अज्ञात भइदिन्छ । स्थानीय मिडियाहरूले समेत त्यसरी नै सूचना फैलाइदिन्छन् । कोरोनासँग ‘मिल्दोजुल्दो’ लक्षण भन्ने गर्नाले पनि भय फैलिँदो छ । पूर्ण तथ्य विवरणहरू संकलन गरेर ‘यही हो’ भन्न सकिने ठाउँमा ‘मिल्दोजुल्दो’ मात्र भनिदिनाले झन् भय बढ्दो छ ।
पालिकाहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकेका स्थानहरू सबैको पहुँचमा छैनन् । नजिकैको सहरमा उपचार गराउने बुता पनि सबैको छैन । सहरमा पुगे पनि ‘भनसुन’ कै आधारमा अस्पतालमा बेड, परीक्षण वा अक्सिजन पाउने अवस्था छ । उपचार गर्न नसकेकाहरूले भन्ने गर्छन्, ‘केकरो कुटिया केकरो झोर, केकरो आँख में टपटप लोर !’ अर्थात्, कसैले माछाको टुक्रा, कसैले त्यसको झोल पाइरहेका छन्, कोही भने तपतप आँसु चुहाउँदै छन् । कोरोनाको उपचार, उद्धार र राहतमा भइरहेका अनेकौ विसंगति बाहिरिरहेका छन् । संक्रमणले सामान्यजनलाई चपेटामा पारिसक्दासमेत कुनै पनि तहको सरकार सक्रिय भएन । मानव विकास अवधारणाका प्रेणता एवं अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन दाबी गर्छन्, ‘क्रियाशील लोकतन्त्रमा कहिल्यै अकाल परेको दृष्टान्त छैन ।’ संक्रमण फैलिनबाट रोक्न तथा थातथलो आइपुगेकाहरूको हेरचाहका लागि भइरहेका कार्य नियाल्दा यहाँ ‘जनताप्रति उत्तरदायी लोकतन्त्र’ छ भन्न मिल्दैन । कुनै पनि तहमा स्वस्फूर्त सक्रियता र सजगता पाइएन । भुइँमान्छेहरू जताततैबाट चेपिन र थिचिन पुगेका छन् ।
गाउँ छाडेर गएकाहरू यसरी फर्किंदा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ ? स्वास्थ्य सेवा सहरमुखी रहेकाले गाउँका संक्रमितहरूलाई कसरी सेवा दिने ? सामाजिक श्रेणीक्रममा निम्न तहमा रहेकाहरूले — जसले बाहिरबाट पैसा कमाएर त ल्याए तर उपचारका लागि शासकीय वृत्तमा पहुँच छैन — भोग्नुपरेको विभेद कसरी फैलिँदै छ ? जसको घरमा संरक्षित अन्न छैन, जो दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्दैनन् तिनको चुलो–अर्थशास्त्रबारे कसले गणना गर्दै छ ? जनप्रतिनिधिले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको निर्धारणमा भुइँमान्छेहरूको भूमिका स्वीकार गर्छन् त ? यस्ता प्रश्नहरूको पहाड मधेसका गाउँ–देहातमा यतिखेर बनिरहेको छ तर शीर्षतहको विमर्शमा यी अनुपस्थित छन् । सहरतिर सूचनाको क्रन्दनले थोरबहुत असर पारे पनि देहातको विलाप सुन्ने कोही छैन ।
पलायन हुनेहरूले नै पैसा, संस्कृति र रोग लिएर फर्किन्छन् भन्ने भनाइले यस पटक देहातमा मूर्त रूप लिँदै छ । गाउँ फर्किएकाहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन कतिपय मर्यादाको उल्लंघन गर्दै छन् । आफूमा स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि ढाकछोप गर्ने, अरूलाई पनि संक्रमित बनाउनेजस्ता अमानवीयता सामान्य नियम बनिरहेको छ । यो डरलाग्दो छ । उता संक्रमित व्यक्ति वा परिवारलाई सहजै स्विकार्न समाज तयार छैन । सहरी गरिबहरूको समस्या पनि त्यस्तै छ । सहरमा सुनिने पीपीई र भेन्टिलेटरको अभावको छटपटी गाउँमा छैन, बरु यहाँ सामान्य सूचना फैलाउने र त्यसको निगरानी गराउने तदारुकताको खाँचो छ ।
संक्रमण फौलनुको सबै दोष सरकारलाई थुपारेर मात्र हुन्न, यसमा ग्रामीण समाज पनि उत्तिकै दोषी छ । महामारी नियन्त्रणमा आमजनको आफ्नै भूमिका देखिनुपर्छ । विवाह–व्रतबन्ध रोकिएको छैन, अनेक निहुँमा भोजभतेर चल्दै छ । भीडभाड परहेज छैन । सहरी क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको असर देखिए पनि गाउँतिर त्यो प्रायः निष्प्रभावी छ । पान, सुर्ती, गुट्खा खाने र सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी थुक्ने चलन रोकिएको छैन । पोहोर कोरोना कहरले सहरमा मृत्यु ल्यायो भनियो, यस पटक उपचार केन्द्रहरूको अभावमा यसले गाउँलाई प्रभावित पारिरहेको छ । तर गाउँलेहरू अझै त्यो पालिका, त्यो टोल भनेर आफ्नो छरछिमेकलाई सुरक्षित मान्दै ढुक्क छन् । बुद्धि पुर्‍याउने हो भने, अझै समय छ । त्यसै गरी कतिपय ठाउँमा भीड गराउने गरी धार्मिक अनुष्ठान थामिएको छैन । पालिका वा प्रदेश–संघीय सभाका सदस्यहरूको बजेट सक्ने निर्माण कार्यले विराम पाएको छैन । कमाउनेहरूका लागि कोरोनाकाल बर्सेनिको असारे बजेट भएको छ । स्थिति जटिल बन्दै छ तर सोअनुरूपको नागरिक निगरानी छैन ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा रेम्डेसिभिरको कालोबजारीको गुनासो छ । मनपर्दी तरिकाले बेचबिखन हुँदै छ । ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्दै यसको आवश्यक परेकाहरू जस्तोसुकै मूल्य तिर्न तयार छन् । सामाजिक संकटलाई निजी लाभमा बदल्ने र जस्तोसुकै संकटका बेला पनि केवल कमाउने ध्येय राख्नेहरू यस पटक मुखर देखिएका छन् । मृत्युदर जति बढ्दै जान्छ, अक्सिजन र यस्ता औषधिहरूको बजारमूल्य पनि त्यति नै उकालो लाग्छ । त्यसै गरी दैनिक उपयोग्य सामग्रीहरूको मूल्य पनि अकासिँदै छ । कोरोना त्रासदी भयानक त छँदै छ, त्योभन्दा भयानक राजकीय र सामाजिक रिक्तता देखिँदै छ । स्वाभाविकै हो, यो विपत्ले गाउँलाई बढी गांँज्दै लगेको छ । यो एउटा उदास बनाइदिने तस्बिर पनि हो । जसलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको देशको नाममा हालै दिएको सम्बोधनले समेत चिर्न सकिरहेको छैन, बरु झन् गहिरो बनाउँदै छ । किनभने यस सरकारले सुझबुझभन्दा पनि लहडमा निर्णय लिन्छ । राष्ट्रिय संकटका बेला पनि यहाँ सर्वदलीय बैठक र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको सोच छैन । आखिर प्रधानमन्त्रीलाई कसले खुसुक्क बताइदिने राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका लागि दलहरूको प्रमुखतालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन भनेर । संसद्मा विश्वासको मत लिने संकल्पको हविगतबारे उनी अनभिज्ञ छैनन् । यस्तोमा सम्हालिने समय चुक्दै गएको छ ।